प्रसस्तै धन कमाउन सक्षम हुन्छन यी ४ राशिका ब्यक्ती - visualnepal
प्रसस्तै धन कमाउन सक्षम हुन्छन यी ४ राशिका ब्यक्ती
राशि नक्षत्रहरूको एउटा घेरा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रह आकाशमा पारगमन गर्छन । ज्योतिषहरूले यि नक्षत्रहरू माथि ध्यान दिए र यिनलाई केही विशिष्ट महत्त्व दिए । समय संग-संगै उनीहरूले बारहौं नक्षत्रहरूको विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसमा आधारित बाह्र राशिहरूको एक प्रणाली बनाए ।
आज हामि १२ राशि मध्ये अधिक धन कमाउन अव्वल ४ राशिको बारेमा कुरा गर्दै छौं वृष : धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् ।
वृष राशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन् । शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचक पनि मानिन्छ । र यही कारण उनीहरू धन कमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् । यो राशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
वृश्चिक:वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिले भौतिक वस्तुप्रति बढी आशक्ति देखाउँछन् । महंगा सवारी साधन, महल, तथा वस्तुले यी मानिसलाई सधैं आकर्षित गरेका हुन्छन् । वृश्चिक राशी हुने मानिसहरू कुशल व्यापारी हुन्छन् । जीवन तथा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अरूको भन्दा फरक हुने गर्छ ।
कर्कट:कर्कट राशी हुने व्यत्तिहरू सधैं राम्रो अवसरको खोजीमा हुन्छन् । बढी भावुक हुने भएकाले आफन्त र परिवारलाई कसरी सुखी राख्ने भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । परिवारको इच्छालाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा नै यी मानिसले बढी ध्यान दिएका हुन्छन् । यही गुणले गर्दा नै उनीहरू बढी मेहेनती हुने र आफ्नो सपनालाई पूरा गरेर छाड्छन् ।
सिंह:सिंह राशी हुने मानिसले आफूलाई अरूभन्दा फरक बनाउन खोज्छन् । अरू मानिसले आफूलाई ध्यान देऊन्, आफ्नो प्रशंसा गरून् र आफूलाई आदर्श मानून् भन्ने चाहना हुन्छ । यही भएर आफूसँग भएको क्षमता र गुण प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । नेतृत्व गर्ने विशेष क्षमता भएका यी मानिससँग ठूल्ठूला चाहना पनि हुन्छन् । महंगा सवारी साधनमा घुमफिर गर्न चाहने, महंगा मोबाइल प्रयोग गर्छन् । आफ्नो व्यक्तित्वले अरूको ध्यान तान्न खोज्छन् । यस्ता गुण भएका कारण नै उनीहरू धन कमाउन लालायित हुने गर्छन् र कमाउँछन् पनि ।
यसैगरी झूट बोल्नु भनेको खराब बानीमा गनिने गर्छ। तर पनि मानिसहरु आफ्नो फाइदाको लागि झुठ बोल्ने गर्छन्। तपाईलाई झुठ बोल्ने बानि हाम्रो राशिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। ज्योतिषको अनुसार, हाम्रो जीवनमा राशिको चक्रको धेरै प्रभावकारी प्रभाव रहने गर्छ। राशिको संकेतको साथ, हामी व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित धेरै सानो जानकारी पनि पाउन सक्छौं। राशिका अनुसार कुन राशि धेरै झुठ बोल्ने गर्छन् भन्ने बारे आज हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौं।
मेष राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरु एकदम स्पष्ट तरिकाबाट व्यवहार गर्नमा रुची राख्ने गर्छन्। सिधा तरिकाबात हरेक कार्य गर्न रुचाउने यस राशिका व्यक्तिहरुलाई खासै झुठ बोल्नु पर्ने आवस्यकता पनि रहने गर्दैन भने यस राशिका मानिसहरु झुठ माथि सजिलै विश्वास पनि गरिहाल्दैनन्।
वृष राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरु जिद्दी प्रकृतिक हुने गर्छन्। आफलाई मन परेको हरेक चिज पाउनको लागि धेरै लालायित समेत रहने भएका कारण सानो-तिनो झुठ भने बोल्ने गर्छन्। तर ठुलै झुठ बोल्न भने डराउने समेत गर्छन्।
मिथुन राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरु आकर्षणमा रहने चाहने हुन्छन्। साथै अरुको नजरमा आफु उत्कृष्ठ रहनु पर्ने भएका कारण धेरै झुठ बोल्ने गर्छन्। सोच स्थिर रहने भएका कारण आफ्नो रुची समेत बदल्ने गर्छन्। पाइला-पाइलामा झुठ बोले पनि खासै नपत्याउने झुठ भने बोल्दैनन्।
कर्कट राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरु धेरैनै ईमानदार रहने गर्छन्। साथै अरुले के सोच्छन् भन्ने कुरामा समेत चिन्तित रहने गर्छन्। आफ्नो लागि नभई अरुको फाइदाको लागि भने थोरै मात्रामा झुठ बोल्न सक्ने यस राशिका मानिसहरु आफ्नो लागि भने खासै झुठ बोल्दैनन्।
सिंह राशि : यस राशि भएका मानिसहरु मानिसहरुको बिचमा आफ्नो प्रस्तुति साथै उपस्थिति बलियो रहोस् भन्ने चाहने राख्ने गर्छन्। धेरै चतुर रहने भएका कारण यस राशिका मानिसहरुको झुठ पनि धेरै सत्य जस्तो देखिन्छ। झुठ बोल्ने काममा धेरै माहिर हुने गर्छन् यस राशिका मानिसहरु।
कन्या राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरुलाई झुठ बोल्ने कार्य मन नपर्ने हुन्छ। जसका कारण धेरै अवस्थाहरुमा झुठ बोल्दै-बोल्दैनन्। धेरै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि धेरै सोचेर मात्रै झुठ बोल्ने यस राशिको बानि रहेको हुन्छ। सानो तिनो समस्याको लागि भने कहिले पनि झुठ बोल्ने गर्दैनन्।
तुला राशि : यस राशि भएका मानिसहरु धेरै जस्तो कूटनीतिक रहने गर्छन् भने हरेक समस्याको हाल कूटनीतिक तरिकाबाट सुल्झाउने गर्छन्। यदि कुनै पनि परिस्थितिमा फसेको अवस्थामा झुठ बोल्न खासै पछि नहट्ने यस राशिका मानिसहरु झुठ लुकाउन समेत खप्पिस रहेका हुन्छन्।
वृश्चिक राशि : यस राशि भएका व्यक्तिहरु झुठ बोल्ने कार्यमा धेरैनै अगाडी रहेका हुन्छन्। हरेक परिस्थितिमा झुठ बोल्ने यस राशिका मानिसहरुको झुठ पक्राउ भएता पनि लाज नमान्ने गर्छन्। झुठ धेरै बोल्ने भएका कारण केहि न केहि झुठ भने यस राशि भएका व्यक्तिहरुको पत्ता लाग्ने गर्छ।
धनु राशि : यस राशि भएका मानिसहरु झुठ बोल्ने कार्यको जहिले पनि विरुद्ध रहने गर्छन्। सकेसम्म झुठ बोल्ने अवस्थामा पनि आनाकानी गर्ने यस राशिका मानिसहरु आफ्नो आफन्त साथै साथीको लागि भने सम्भव भएसम्म धेरै सानो साथै सामान्य झुठ भने बोल्न सक्छन्।
कुम्भ राशि : यस राशि भएका मानिसहरु खुशमिजास रहने गर्छन्। आफ्नै तरिकाबाट रमाउने यस राशिका मानिसहरु ठट्टा गर्न पनि सिपालु रहने गर्छन्। कहानी बनाउनमा पनि यस राशि भएका मानिसहरु माहिर रहने गर्छन्। जसका कारण यस राशि भएका व्यक्तिहरुलाई झुठ बोल्न धेरै सजिलो लाग्ने गर्छ। आफ्नो मतलबको लागि जुनै पनि हदसम्मको झुठ बोल्ने यस राशिका बानि रहेको छ।
मीन राशि : यस राशिका मानिसहरु धेरै नै कम झुठ बोल्ने गर्छन्। यस राशिका व्यक्तिहरु झुठ बोल्ने कार्य देखि डराउने समेत गर्छन्। तर धेरै नै संवेदनशील रहने भएका कारण यस राशिका मानिसहरु अरुको भलाइको लागि भने सानो-तिनो झुठ भने बोल्न सक्छन्।
पटक हेरिएको 2,069
सोमवार यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
जन्मदै धन कमाउने भाग्य लिएर आएका हुन्छन यी तीन राशिका मानिस
बेलुकी पख यस्ता कार्य नगर्दा नै राम्रो ! हैन भने तपाईको जीवनभर दु:ख हुनेछ
कालो धागो बाध्दा यी राशिका मानिसलाइ निकै फाईदा हुन्छ
घडेरी(भूमि) किन्दा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुस
कस्ता मानिसले माछा खानु हुँदैन त ? जान्नुहोस
कपाल हेरेर यसरी थाहा पाउनुहोस कुनै रोग लागेको छ कि छैन भनेर
महिलाहरु सँग गर्नै नहुने ५ कुरा
यी ५ जीव घरमा पसेमा आउन सक्छ सङ्कट
© 2022 - visualnepal. All Rights Reserved.